Nizeria: Hampangiana Ny Kiana Sa Hiady Amin’ny Heloka Bevava Ety Anaty Aterineto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 22:08 GMT
Manapa-kevitra mikasika tolo-dalàna marobe mikendry hiady amin'ny heloka bevava atao anaty aterineto ireo Nizeriana mpanao lalàna — nefa afaka hampangiana ireo kiana atao ny governemanta eny ampandehanana eny.
“Lalàna Iray Mikendry Ny Handràra Ny Fanaovana Hosoka Elektronika Amin'ny Fifanakalozana Elektronika Rehetra Ao Nizeria Sy Ny Raharaha Rehetra Mifandraika Amin'izany” [SB198, Taona: 2008] natao hikendrena ireo kazarana endrika samihafan'ny hosoka sy heloka bevava ara-bola atao ety anaty aterineto na amin'ny alàlan'ny telefona finday. Tany am-piandohany, raha notohanan'i Ayo Arise, loholon'ny Antenimieram-Pirenena faha-6 ao Nizeria, ny drafitra fototr'ilay tolo-dalàna dia nilaza famonjàna fotoana maharitra (dimy hatramin'ny 14 taona) ho an'ireo tsy manaraka ny lalàna.
Ny vaovao manohana ilay tolo-dalàna ankehtriny dia ny Loholona Sefiu Adegbenga Kaka avy amin'ny Antenimieram-Pirenena faha-7, izay nanome toky fa hanakantsana “ireo andininy rehetra tsy azo ekena ao anatin'ilay tolo-dalàna natolotra.”
Tsy misy isalasalana fa ity toko ao anatin'ilay lalàna ity dia mety ho ampiasaina hamadihana ho heloka ireo kabary, fiantsoana fihetsiketsehana, na endrika hafanam-po politika hafa. Kanefa, ny sasany amin'ireo mpikambana manana ny lanjany ao anatin'ny vondrompiarahamonin'ireo goavana amin'ny sehatry ny teknolojia no mahita zavatra tsara ao anatin'ilay fepetra. Blossom Nnodim, mpanorina ny tetikasa fandraharahana sy media sosialy AdoptATweep, dia mihevitra fa teny manan-danja manokan'ilay tolo-dalàna ny hoe “vaovao diso”. Mino i Nnolim fa raha lolohavina an-tampon'ny loha ny fahalalahana maneho hevitra, tsy maintsy misy fandrindràna/fepetra handraràna ny fanalàm-baraka sy ny fanelezana vaovao diso.
Mety natao hanakanana ny fivoahan'ireo antontan-drakitra efa nampirimina toy ny tamin'ny endriny Snowden ity tolo-dalàna ity, miaraka amin'ireto sazy manaraka ireto :
Nahasarika ny sain'ny Global Voices i Gbenga Sesan, Tale mpanatanteraky ny Paradigm Initiative Nigeria, mikasika izay nofaritany ho loza goavana mananontanona ny fahalalahan'ny aterineto ao Nizeria — ny Cyber Crime Bill (2013) / Tolo-dalàna hiadiana amin'ny heloka bevava anaty aterineto — izay ao amin'ny Antenimieram-Pirenena amin'izao fotoana izao.
Tsy sambany akory i Nizeria no tratry ny savaravina toy ity mikasika ny fametrahana politika faneriterena mifandray amin'ny resaka aterineto. Ny Jolay 2012, efa notaterinay teto ireo fitakiana avy amin'ny Filohan'ny Loholona Nizeriana hametrahana sivana amin'ny media sosialy. Tany ampiandohan'ity taona ity, nojerenay ireo drafitry ny governemanta hanao asa goavana ho fanaraha-maso ny aterineto amin'ny fampiasàna rindrambaiko novidiany tamin'ny Elbit Systems, orinasa Israeliana
Niondrika teo anoloan'ireo fanakianan'ny olona ary namafa ilay andàlana nampitroatra tao anatin'ilay tolo-dalàna ny Loholona Nizeriana.